Akasiyana-siyana Artist Blends Passion Yemabhiza uye Anoshamisa Kufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Akasiyana-siyana Artist Blends Passion Yemabhiza uye Anoshamisa Kufamba
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Unoshamisa hunyanzvi hunosanganisa mabhiza uye kufamba
Shamwari yakawiriranwa yakandizivisa kubasa revatambi veBritish vane tarenda, Marcus Hodge. Akanditumira mifananidzo yebasa rake, uye ini ndakakotamiswa nemifananidzo yake inoshamisa uye yakajeka yemabhiza, nzombe, uye mhou izvo zvakaita kuti munhu anzwe kuti vangasvetuka kubva muhombe.
Iyo nyanzvi ine solo yekuratidzira inouya kuOsborne Studio Gallery mukati memwedzi waGumiguru.
Iko kutarisisa kwechiratidziro ichi inyika yenyika yebhiza kubva parwendo rwevadiki mumakore maviri apfuura.
Vakanga vari vanasekuru vevaimbi vakaratidza rudo rwake rwekubuda kunotanga kuongorora nyika uyezve nyika nekuzvinyora kuburikidza nehunyanzvi.
Ndakafadzwa ndikatsvaga kuziva zvakawanda nezvekwakabva kwake. Ndakaona kuti Hodge, uyo akazvarwa muna 1966, akaburitsa basa rinoshamisa rinofemerwa nerwendo rwake kubva kuAndalucia kuenda kuIndia.
Vadi vemifananidzo vachakwanisa kuona mifananidzo yaHodge pane yake inotevera solo yekuratidzira pa Osborne Studio Garari kubva muna Gumiguru 5-28, 2021. Iko kuunganidza kunounza pamwechete mifananidzo kubva mukufamba kwemuenzi mumakore maviri apfuura uye kuongorora nyika yebhiza, kubva kuMarwari mabhiza eRajasthan, epasi rese masekisi emabhiza eMonaco, kune akakwana uye eArabia mabhiza yekuMiddle East.
Hodge akarererwa nasekuru nasekuru vake avo vakapedza makore mazhinji muIndia, uye vakaratidza kufarira kwake kuti vabude ndokutanga kuongorora nyika. Chinhu chakakoshesa sosi yekufemerwa kwechiratidziro ichi yaive yaNovember Camel Fair muPushkar, Rajasthan, chimwe chezviitiko zvekufambisa zvakanyanya muIndia, tarisiro pachiyero. Akatsanangura maonerwo azvakaitwa: Ini ndakaita nzendo dzakawanda kuIndia pamusoro pemakore uye ndakashanyira guta rePushkar panguva yemakamera akanaka, kana kana kashanu.
“Pushkar iguta diki rakanaka, rinoyera kwazvo kumaHindu, iro rinoputika muhupenyu hwekuratidzira ngamera yegore. Iwe unogona kuratidzira mukunakidzwa mumigwagwa asi dzokera kunzvimbo dzakanyarara diki matenga kana zvichidikanwa. Nzvimbo yakanaka yekunakidzwa nekusiyana-siyana uye tempo. ”
"Asi denda risati ratanga ndakashanyira El Rocio muAndalucia uko vane mumwe mutambo mukuru, zvakare nemazana mazhinji emabhiza nevanhu vanobva kumatunhu akasiyana siyana."
Mushure memakore mashanu achidzidza Yekare Master hunyanzvi muPalma, Mallorca, Hodge akaita zita rake semufananidzo wemifananidzo. Akatanga kuenda kuIndia muna2000. Rwendo urwu kwaive kutanga kwekunakidzwa kwakanyanya neIndia, nekuda kwetsika, mamiriro uye hunhu hwemweya. Kunyangwe chiratidziro chake chiri kuuya chine dingindira rehosi, maitiro ake ari kuramba achichinja kuve akajeka uye akareruka, dzimwe nguva kupenda kwekufananidzira kunopa nzira yekubvisa.
Iyo mifananidzo inowanzo tarisa kumhuka uye nevanhu, zvivakwa uye nzvimbo. Sekureva kwaHodge, "nyaya yacho inokurudzira asi chaizvo ihuremu pakati pazvo nekuishandisa sechikuva chekugadzira mhedzisiro, inoratidzika. Kugadzira pamusoro nekunetsekana kwependi kushanda chaiko kwakakosha sekumiririra mufananidzo uye kana wabudirira pane kuwirirana kunofadza pakati pezviviri. ”
Hodge anoti anoramba achidzokera kumusoro wenyaya wemabhiza nekuti anogara achiwana chimwe chinhu chinonakidza uye chinooneka chinokwezva nezvavo - kubonderana kunoshamisa kwerunako nehunyanzvi hwekugadzira. Kunyangwe paine shanduko yechinyakare, dingindira rinogara riripo, kunyanya, iIndia. Anoti, "Matekinoroji ekupenda anobva mukumiririra kuenda kune zvisingabvumike uye kumashure nekuti zvakawanda zvezviitiko zvauinazvo ipapo, zvinoda mhinduro yakasiyana. Mhuka yakanaka kana chimiro chinoda kuti ndiipende nokutendeka uye ndimboedza kudzokorora pendi kanogutsa panyama uye kumiririra kwechokwadi uye kwechokwadi kwenyaya iyi. ” Mamwe madingindira, akadai seakaitika enhoroondo eGateway yeIndia kana iyo Breaking the Cycle akateedzana emifananidzo kubva kuVaranasi, inoda nzira yakatosiyana. Izvi ndizvo zvinoita kuti chiitiko chirarame uye chinakidze kwaari.
Kunyangwe hazvo tarisiro yebasa rake iri kunyanya kuIndia neEl Rocio kuSpain kune zvakare kune mashoma mapendi kubva kuFrance kunogara baba vake (zvakare muimbi). Hodge anoramba chero zano rekuti chiratidziro chingangokwezva kune vanhu vakashanyira India. “Ndinovimba kwete. Iyo pendi inogona kunakidzwa pane ese ari maviri padanho rekumiririra uye sekungofanana nemifananidzo zvisinei nechinangwa. Kunyura kwezuva kwakanaka kudoka kwezuva kwakanaka chero kwazvinoitika. ”
Hodge akatanga kupenda paakaenda kuchikoro chetsika muMallorca aine makore makumi maviri nemashanu. Ndiri kudzidzisawo akati wandei makirasi pavhiki pachikoro cheunyanzvi saka netarisiro yekupfuudza zvimwe zvacho. Saka vazhinji vakasiyana maartist vanondifarira. Asi ini ndinofunga ivo vese vanogovana hunhu hwavanoshandisa pendi nenzira yakajeka uye yemahara. Zvakare, parizvino ndiri kunyanya kunakidzwa nehunyanzvi hweMinial Miniature hwaMughal, hwakaunzwa husingaperi paunotanga kuverenga nezvevanyori vari mazviri. ”
Avo vasingakwanise kushanyira chiratidziro vari munhu vanogona kuona mifananidzo iri paOsborne gallery webhusaiti uye Hodge yewebhu webhusaiti .
Paakabvunzwa nezvezvirongwa zvake zvenguva yemberi Hodge anoti: “Ini ndinofunga, pazvinoita sezvine musoro, kudzokera kuIndia uye kuenderera mberi nekushanda ikoko uye kuona zvinoitika. Handifarire kuronga zvakanyanya, asi kutsvaga nzvimbo irikukufonera uye kuvhura chero zvingaitika. ”